Qoor Qoor oo Farmaajo iyo Fahad Yaasiin hordhigay dalab ku aadan Ra'iisul Wasaaraha cusub | KEYDMEDIA ONLINE
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye [Qoor-Qoor], oo Isniintii soo gaarey magaaladda Muqdisho, ayaa ku guda jira kulamo albaabada u xiran, oo uu la leeyahay Madaxda sare ee Dawladda Federaalka ah ee Soomaaliya.
Xogta ay heshay Keydmedia Online ayaa sheegaysa in Qoor-Qoor uu la kulmay Farmaajo iyo ninka gacantiisa midig ah, taliyaha NISA, Fahad Yaasiin, isagoo kala hadlay sidoo qof kasoo jeeda Galmudug loogu magacaabi lahaa xilka Ra'iisul Wasaaraha.
Farmaajo iyo Fahad Yaasiin ayaa dalabka Qoor-Qoor ku daray liiska shaqsiyaadka miiska u saaran, oo isagu jira kuwa aan horey siyaasadda loogu arag, oo wajiyo cusub ah iyo kuwa la yaqaano, oo dhamaan kasoo jeeda Beelaha Hawiye, oo xilkan loo qoondeeyay.
Waxaa sidoo kale jira dedaallo uu wado Madaxweynaha HirShabeellaha Maxamed Cabdi Waare, oo isna xusul-duub ugu jira sidoo shaqsi gobolkiisa Hiiraan kasoo jeeda looga dhigi lahaa Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya, kaasoo xafiiska sii heyn doono illaa doorasho laga qabanayo.
Lama oga in Farmaajo iyo Fahad Yaasiin ku magacabayaan Ra'iisul Wasaaraha soo-jeedinta Madaxda iyo Odayaasha dhaqanka ee ay kula kulmayaan Villa Soomaaliya, balse waxay shacabka Soomaaliyeed ogyihiin in qofka imaanaya uu noqon doono mid ka shaqeynaya danta Qatar ay ka leedahay dalka.
0 Comments Topics: fahad yasiin farmaajo galmudug kheyre qoor qoor